National Power News:: बलिउड कब्जा गर्ने श्रीदेवीलाई पनि छाडेन हृदयाघातले ! National Power News:: बलिउड कब्जा गर्ने श्रीदेवीलाई पनि छाडेन हृदयाघातले !
• नेपालमैं पहिलो पटक विच फेशन शो सम्पन्न • जान्या र केबिन जुनियर लिटिल स्कुल स्टार लुम्बिनी २०२२ घोषित • आयुष्मान विष्टको पहिलो गीति एल्वम ‘मेरो कलिलो मन’ विमोचित • मिस टिन हिमालय नेपाल२०२२ को ट्यालेन्ट राउन्ड सम्पन्न • ‘कलाकर्मी डाइजेष्ट’ को विमोचन,पाँच व्यक्तित्वलाई ‘कलाकर्मी सम्मान–२०७९’
बलिउड कब्जा गर्ने श्रीदेवीलाई पनि छाडेन हृदयाघातले !
Sunday, February 25, 2018 National Power
१३ फागुन, काठमाडौं – बलिउडकी हरेक इभेन्टमा छोरी जान्ह्वीलाई डोहोर्‍याउँथिन्, श्रीदेवी । उनकै पदचाप पच्छ्याउँदै छोरी बलिउड इन्ट्री गरिन् । करण जौहरको फिल्म ‘धडक’बाट जान्ह्वीले डेब्यु गरिन् । तर, आफ्नी छोरीको फिल्म हेर्न पाइनन् ।
पति बोनी कपुर र सानी छोरी खुसीसँग दुबईमा आफ्ना भान्जाको बिहेमा सरिक हुन गएकी उनको हृदयघातको कारण निधन भयो । बोनीका परिवार बिवाह सकेर दुबईवाट फर्किएका थिए । तर, बोनी, श्रीदेवी र छोरी खुशी त्यही बसे । जान्ह्वी चाहि फिल्म सुटिङको कारण दुबई जान पाएकी थिइनन् ।
चाइल्ड आर्टिस्टबाट बलिउड
१३ अगस्ट १९६३ मा तामिलनाडुमा जन्मिएकी हुन्, श्रीदेवी । उनले आफ्नो करियर त्यसबेला सुरु गरिन्, जतिबेला उनी चार बर्षकी थिइन् । त्यसबेला उनले तमिल फिल्म गरेकी थिइन् । दक्षिण भारतिय फिल्ममा काम गरेपछि श्रीदेवीले हिन्दी भाषाको ‘जूली’ फिल्म खेलिन्, १९७५ । यतिवेलासम्म पनि उनी बाल कलाकारकै रुपमा थिइन् । जुलीबाट उनी बलिउडमा तानिएकी थिइन् ।
१९८३ मा फिल्म ‘हिम्मतवाला’बाट भने उनी रातारात स्टार बनिन् । आफ्नो जमनाकी सर्वाधिक हिट अभिनेत्रीले करियरको उत्कर्षमा सुरपहिट फिल्मको थुप्रो लगाइन् । यसैबीच उनले १९९६ मा फिल्म निर्माता बोनी कपूरसँग बिवाह गरिन् । उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध भने फिल्म ‘मि।इन्डिया’को छायांकनको क्रममा भएको थियो ।
लेडी अमिताभ बच्चन
बलिउडमा ८० को दशकमा श्रीदेवी छाएकी थिइन् । उनको चमकदमक सामु अन्य अभिनेत्री फिका देखिन्थे । त्यस अवधीलाई श्रीदेवीको दशक भन्ने गरिन्छ । त्यही ताका हो उनले, हिम्मतवाला, तोहफा, मिस्टर इन्डिया, नगीना जस्ता सुपरहिट फिल्म खेलेकी । त्यसबेला उनलाई ‘लेडी अमिताभ बच्चन’को उपमा दिइएको थियो । करियरको उत्कर्षमा उनले धेरैजसो जीतेनद्रसँग स्क्रिन शेयर गरिन् । १९९७ मा उनले ‘जुदाई’ फिल्ममा अभिनय गरिन् । त्यसपछि उनी सिल्भर स्क्रिनबाट ओझेल भइन् ।
बोनी कपुरसँग बिवाह
फिल्मी जीवनले रफ्तार लिइरहेका बेला उनले बोनी कपुरसँग बिवाह गरिन् । यो सन् १९९६ को कुरा हो । बोनी बलिउडका फिल्म निर्माता थिएरहुन् । उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध फिल्म ‘मिस्टर इन्डिया’को छायांकनको क्रममा भएको थियो । बिवाहपछि श्रीदेवी पारिवारिक जीवनमा फर्किइन् । उनको कोखबाट दुई छोरी भए । डेढ दशक उनले पारिवारिक विश्राम लिइन् ।
बलिउड कमब्याक : लामो विश्रामपछि उनी केहि समयअघि ‘मम’ फिल्ममा देखिइन् । त्यसअघि ‘इंग्लिश विंग्लिश’मा अभिनय गरेकी थिइन् ।
श्रीदेवीको डेब्यु १९७८ मा प्रदर्शित फिल्म ‘सोलहवां सावन’ लाई मानिन्छ । त्यसपछि उनले हिम्मतवाला, मवाली, तोहफा, नगीना, आखिरी रास्ता, कर्मा, मिस्टर इन्डिया र चाँदनी जस्ता फिल्म खेलिन् ।
१९८३ मा कमल हसनका साथ आएको फिल्म ‘सदमा’मा उनको अभिनयको खुब तारिफ भयो । १९८९ का ‘चालबाज’ र १९९१ को ‘लम्हे’मा उनले दोहोरो भूमिका गरेकी थिइन् । १९९६ मा उनी शाहरुख खानसँग ‘आर्मी’ फिल्ममा देखिइन् । उनी शाहरुखकै आगामी फिल्म ‘जीरो’मा पनि विशेष भूमिकामा देखिँदै थिइन् ।
श्रीदेवीसँग जोडिएको रोचक कुरा
– श्रीदेवीले आफ्नो करियर बाल कलाकारको रुपमा सुरु गरेकी थिइन् ।
-बलिडउड आउनुअघि उनले दक्षिण भारितय फिल्मबाट करियर थालेकी थिइन् ।
-८० को दशकमा हिन्दी फिल्ममा श्रीदेवीको राज थियो ।
-१९९७ मा ‘जुदाई’ खेलेपछि उनले १५ बर्षसम्म विश्राम लिइन् ।
-यसबीचमा उनले फिल्म निर्माता बोनी कपुरसँग बिवाह गरिन् ।
-बोनी कपुरका दोस्रो श्रीमति हुन्, श्रीदेवी । बोनी कपरकी पहिलो श्रीमतिको नाम मोना थियो, जसको क्यान्सरको कारण निधन भयो ।
-श्रीदेवी र मिथुन चक्रवर्तीको भेट फिल्म ‘हम पांच’को क्रममा भएको थियो । त्यसका निर्देशक बोनी कपुर थिए । शुटिङका क्रममा श्रीदेवी र बोनी कपुरबीच सम्बन्ध रहेको मिथुनले थाहा पाएका थिए ।
-तर, मिथुनलाई उक्त कुरा लुकाउनका लागि श्रीदेवीले मिथुनकै अगाडि बोनीको हातमा राखी बाँधिदिएकी थिइन् ।
-श्रीदेवी पूजापाठ, धर्मकर्ममा निकै विश्वास गर्थिन् । श्रीदेवीका एक समूह यस्ता पनि छन्, जसलाई उनीहरु धार्मिक ग्रुप भन्थे ।
-श्रीदेवी आफ्नी दुई छोरीलाई अत्यन्तै प्रेम गर्थिन् । अक्सर उनी छोरीहरुसँगै हुन्थिन् ।
नेपालमैं पहिलो पटक विच फेशन शो सम्पन्न
काठमाण्डौं । नेपालमा पहिलो पटक विच फेशन शो आयोजनामा आएकोे छ । र्ईभेण्ट आयोजक...
जान्या र केबिन जुनियर लिटिल स्कुल स्टार लुम्बिनी २०२२ घोषित
प्रारम्भ प्रोडक्सनद्वारा होटल पौवा, योगिकुटीमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशब्यापी “लिटिल स्कुल स्टार लुम्बिनी २०२२” को...
आयुष्मान विष्टको पहिलो गीति एल्वम ‘मेरो कलिलो मन’ विमोचित
काठमाडौं – गायक आयुष्मान विष्टको पहिलो गीति एल्वम ‘मेरो कलिलो मन’ तथा साङ्गीतिक समारोह...
मिस टिन हिमालय नेपाल२०२२ को ट्यालेन्ट राउन्ड सम्पन्न
काठमाडौं । कथा इभेन्टको आयोजनमा हुन लागेको मिस टिन हिमालय नेपाल२०२२ को ट्यालेन्ट राउन्ड...
‘कलाकर्मी डाइजेष्ट’ को विमोचन,पाँच व्यक्तित्वलाई ‘कलाकर्मी सम्मान–२०७९’
काठमाडौं– कलाकर्मी मिडिया म्यानेज्मेन्टले प्रकाशन गरेको मासिक पत्रिका ‘कलाकर्मी डाइजेष्ट’ को पहिलो अंकको शनिवार...
सुमन दाहालको लेखन, निर्देशनमा “छोराछोरी बिदेशी भूमिमा” को भिडियो सार्वजनिक
काठमाण्डौ- लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका चलचित्र निर्देशक तथा गीतकार सुमन दाहाल त्यहाँ चलचित्र...